Imininingwane Eningiliziwe Yewebhu 2.0 Martech Zone
I-Web 2.0 Information Overload
NgoLwesithathu, Novemba 18, 2009 ULwesibili, May 6, 2014 U-Adam Encane
Ukhungathekiswe inani lemininingwane, izinhlelo zokusebenza, nezixazululo ezintsha eziza kuwe? Ngiyazi ukuthi nginguye! Ngibize ngesilima, kepha ezinye zezinto engizisho namuhla zingaba yizindaba ezindala kwabaningi, kepha ngolwazi oluningi laphaya, ngubani ongakwazi ukuqhubeka. Ngaphandle kokuthi ukhona Douglas Karr or UKyle Lacy - okuyindlela, ngiyaqiniseka ukuthi abalali!
Ngiqale ukusebenzisa amathuluzi wenhlangano amasha ukugcina yonke imininingwane ihlolwe. Nakhu okumbalwa engikuthola kuwusizo:
Delicious: Kulungile, kulungile, ngiyazi iningi lenu elifunda lokhu kungenzeka selivele lazi ngoDelicious. Ngiyazi nami, kepha kuze kube yilapho umhlaba wokwabelana nomphakathi uvela, awuzange ube nomthelela omkhulu kangako. Ngiyakuthanda ukuthi ngikwazi ukubeka uphawu lokubekisa uphawu bese ngiyimaka kude noma ngabe ngikuphi kukhompyutha, lapho ngikhona, ngihlala nginezintandokazi zami khona lapho. Ingasaphathwa indawo esheshayo nelula yokuthola zonke lezo zixhumanisi engifuna ukuzikhumbula. Njengokuthunyelwe kwebhulogi kwakamuva, isimemo se-webinar, noma i-athikili.
I-Picnik: Futhi, abathengisi bangabantu abanobuciko futhi kufanele sikwazi ukuklama ku-pinch. Ngiyakwazi ukuklama lapho kudingeka, kepha uma ngifuna okuthile okusheshayo, okulula, nokulula… ngikhetha i-picnik! Ikakhulukazi kulawo maphrojekthi ofuna ukunonga kancane ngaphandle kwamandla amaningi obuchopho. I-interface yabo kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi futhi njenganoma yiluphi uhlelo lokusebenza olususelwa kuwebhu… .ungafinyelela izithombe zakho noma kuphi.
I-Feedburner: Njengamanje senginesiqiniseko sokuthi uyacabanga, ngabe yiliphi idwala abekade elingaphansi kwalo? Hhayi kangako… .khumbula, ngingumakethi omatasatasa ngiyijikisa yonke i-AZ! Ngidinga ukushesha, ngidinga okulula, futhi ngidinga ukubuyela kukho lapho ngisencane. Ngenkathi ngihlala ngazi futhi ngithanda i-feedburner yamakhono we-RSS, kepha ngisanda kufunda ngekhono lokushumeka ifomu le-imeyili kubhulogi yakho futhi. Futhi-ke amamethrikhi, kuhle kakhulu ukuthi ngizoba nawo wonke la mathuluzi wonke ngaphakathi kwepulatifomu yami yansuku zonke yeGoogle.
Izinhlelo zokusebenza ze-Google: Angifuni ukuzwakala njengomuntu ozinikele ku-Google ngoba njengabanye abathengisi abaningi ngihlale ngikhungathekiswa yibo ngokuzama nje ukuthuthukisa usesho lwami. Kodwa-ke, eDelivra, sonke sisebenza kusuka ku-Google Apps ngakho konke futhi ngenkathi ngineqiniso lokuthi ukonga izindleko kukhulu uma kuqhathaniswa nanoma iyiphi i-software yedeskithophu, kuyangihlaba umxhwele ngezicelo ezahlukahlukene ezivela ngeposi, ikhalenda, amasayithi (esiwathandayo!), Imibhalo, uyiqambe igama. Manje sengiyazi ukuthi ayiphelele, kepha ukufinyeleleka kanye neqiniso lokuthi alishayeki kanye ngosuku kungithengisile.
SmartSheet: Lokhu kungenzeka kube yilona kuphela uhlelo lokusebenza iningi lenu elingase lingazi ngalo. Ngiyayithanda iSmartSheet njengoba ngiwumenzi wohlu njalo. Ngikugcina kanjani okunye ukulandela izinkulungwane zezinto engizenza nsuku zonke? Kunoma ikuphi, uhlelo lokusebenza lungisiza ukuphatha okuningi okufanele kwenziwe lapho ngingakwazi ukukubeka khona kuqala, ngabelane nabanye, ngihlele noma yikuphi, ngiphrinte noma ngifinyelele lapho ngikhona.
Lapho unawo, amathuluzi amahlanu alula angivimbela ekunqobeni ulwazi olwengeziwe. Uma ungumkhangisi obulawa yindlala noma ulambile nje, faka amanye ala mathuluzi esikhwameni sakho samaqhinga futhi uzokwazi ukuphatha umthwalo ngokukhululeka okukhulu. Uma kungenjalo, zibheke njengezixhumanisi ezintsha kulokho osuvele ukwazi futhi uyakuthanda.
Tags: Social Media MarketingWordPress
Izingwejeje ezinamakhanda amfushane namaKamikazes
Phromotha umkhiqizo wakho ezingqungqutheleni ngesikhumba selaptop
Nov 19, 2009 ngo-2: 09 AM
Ngikhetha iDiigo kuneDelicious yize iGoogle Sidewiki isiqala ukunginaka ngamandla ayo esichasiselo afanayo (acatshangwa ukuthi ANAMANDLA) kulawo weDiigo.
Nov 19, 2009 ngo-4: 05 AM
Uhlu olufushane olupholile uCarissa. Kukhombisa ngamafuphi amapulatifomu ahlukile sonke abadayisi esiwadingayo ukwenza izinto zethu zenziwe. Ngibheka i-SmartSheet. Njenge-drthomasho, ngincamela iDiigo kuneDelicious ngoba ungenza amanothi emakhasini. Omaki ababi, kepha nge-Diigo ngingawasebenzisa womabili amathegi nama- "stickies" emakhasini ukugxila engxenyeni eyodwa yakho konke okuqukethwe okulondoloziwe. Sobonana futhi maduze! –UPawulu
inkampani eyakha iwebhusayithi
Okthoba 3, 2011 ngo-8: 15 AM
Lawa mathuluzi awusizo ngempela. Ngiyethemba wonke umuntu nakanjani uzokusebenzisa lokhu okuthunyelwe okufundisayo futhi asebenzise la mathuluzi abalulekile ekwenzeni isiza sisebenze.
Feb 12, 2012 ngo-7: 28 AM